ငါးသန်းမြောက် ထရိတ်ဒါကဘယ်သူဆိုတာကို FBSကြေညာပေးလိုက်ပါပြီ!
ချစ်မိတ်ဆွေများတို့ရေ! ဒီနေ့ကတော့ ငါးသန်းမြောက်ထရိတ်ဒါ ကံထူးရှင်ရဲ့အမည်ကို ကြေညာပေးရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်. ကံထူးရှင်ကတော့ Turkey မှ Ferhat Idil ပဲဖြစ်ပါတယ်. ဒီနေ့တော့ ထိုကံထူးရှင် ကို ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်းဖုန်းဆက်ပြောပြီး အခုလိုအမှတ်တရအတွက် ဘယ်လိုလက်ဆာင်မျိုးလိုချင်သလဲဆိုတာကို မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. မကြာခင်မှာ ကုမ္ပဏီဝက်ဆိုဒ်နဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေမှာ ကံထူးရှင်ထရိတ်ဒါကို အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးအပ်တဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သတင်းတွေကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ. FBSအား သင့်အကျိုးဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လဲ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်!